Dowladda Federaalka oo u jawaabtay Sheekh Shariif Sheekh Axmed - BBC News Somali
Image caption Sheekh Shariif Sheekh Axmed
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo hadlay saacado un kadib markii uu Magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay Sheekh Shariif iyo Xassan Sheekh ayaa waxaa uu sheegay in Dowladda Federaalka ay "Aad ula yaabtay hadalkii filan waaga ahaa ee ka soo yeeray Shariif Sheekh Axmed".
"Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay aad ula yaabtay hadalkaas filan waaga ahaa ee ka soo yeeray Shariif Sheekh Axmed, hadalkaas oo filan waa ku noqday guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, kaas oo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran usoo noqday", ayuu yiri wasiir Maareeye.
Hogaamiyeyaasha Madasha xisbiyada Qaran oo xalay shir jaraa'id ku qabtay Magaalada Muqdisho, kadib markiii ay ka soo laabteen Magaalada Beledweyne ayaa waxaa ay Dowladda Federaalka ku eedeeyen in ay hor istagatay safarkoodi Magalaada Beledweyne.
Image caption Wasiir Maareeye
Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud ayaa markii ay ka soo laabteen Beledweyne, shirka jaraa'id ka sheegay in garoonka uu ahaa mid angagan oo wax dhiiqa ah uusan lahayn, waxaana uu intaa raaciyay in aysan garaneyn sababta loogu diiday in ay degaan.
Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed ahna hogaamiyaha Madasha xisbiyada Qaran oo shirka jaraa'id kaga hadlay arrintan ayaa aad ugu dheeraaday waxa uu ku tilmaamay "ku takrifalka awoodeed ee dowladda", waxaana uu intaa raaciyay in uu dulqaadkii ka dhamaaday.
"Magaaladan Mooryaan ayaa heysan jirta soma ahan, waa lala dagaalamay waa la bixiyay. Itoobiyan ayaa soo galay maxaa lagu sameeyay ? waa la bixiyay, Al Shabaab ayaaa qabsaday waa la bixiyay, ma ka xoog badan yihiin dadkan? Kama xoog badna. Walaahi Thuma walaahi …. Walaahi Thuma walaahi …. Walaahi Thuma walaahi …. Hadii aysan joojin waan bixineynaa, oo qofka aan sharci rabin muxuu nagu la joogaa? Moryaannimo, Mooryaanimo ma oggolin wana diidnay. Anaga sharci in la isku xukuma aya rabnaa", ayuu yiri Sheekh Shariif.
Sheekh Shariif oo muddooyinkii dambe dhaliilsanaa qaabka dowladda ay dalka u maamusho iyo go'aanada ay qaadaneyso ayaa u muuqday qof careysan, waxaana uu dowladda ugu hanjabay in ay qaado tallaabo lamid ah kuwii ay horay u qaaday.
Image caption Sheekh Shariif ayaa hogaamiye u ah madal ay ku mideesan yihiin qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka
Dhinaca kale waxaa isla shalay arrintan ka hadlay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeele, Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in aysan jirin cid safar laga hor istaagay, balse caqabadu ay ahayd in garoonka Baledweyne ay biyo fadhiyeen kadib roobab halkaasi ka da'ay.